Douglas Karr »Peeji nke 708 nke 852» Onye guzobere Blog MarTech
Ịgụ Oge: <1 nkeji Ezigbo enyi na onye ọrụ, Marty Bird, gosipụtara atụmatụ a na-atọ ụtọ nke m na-ahụbeghị mbụ na Google. Ikike ime ọchụchọ saịtị na nsonaazụ ọchụchọ n'ezie: M na-eji saịtị Search eme ihe ọfụma na Google. Nkọwapụta ahụ dị mfe ma ọ na-adịkarị ngwa ngwa karịa iji usoro nyocha nke saịtị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọọ na saịtị m, dịka ọmụmaatụ, na aro maka ederede Indianapolis, syntax ahụ bụ saịtị: martech.zone indianapolis. Na
Ịgụ Oge: <1 nkeji Na mgbede a, ezutere m Pat Coyle na ndị ọzọ na-aooụ mmanya na Pat's Open House na Obere Indiana Isi ụlọ ọrụ. Otu nnukwu mkparịta ụka mụ na Lalita Amos nwere, onye ndu ndị nkuzi na ndị ọkachamara n’ihe gbasara mmadụ, Purdue Alumni, na Adjunct Prọfesọ na NYU. Enwere m obi ụtọ isoro Lalita kerịta ebe a mgbe m gwara IABC maka iji Social Networks n'ime ụlọ ọrụ. Lalita rịba ama na teknụzụ na-amanye ndị njikwa n'ọrụ
Ịgụ Oge: 3 nkeji Nke a bụ ozi email ọzọ m hụrụ n'anya, mana anaghị m eme ihe ọ bụla! Nke a bụ Ogbe ndịda Indianapolis, Amazingly New Email. M na-edebanye aha n'ihi na enwere m olileanya na nhazi ọhụrụ ga - apụta - ozi iji kwalite ogbe ndịda Indianapolis dị ebe ahụ, mana imepụta ahụ na - eme ka email ahụ ghara ịgụta agụta ma ghara iji ya rụọ ọrụ. Nke a bụ ihe kpatara ya: Enweghị isi njikọ dị na isi ozi gaa na weebụsaịtị n'ezie maka Indy Downtown Inc. Ikekwe nke ahụ bụ nlekọta,
Ịgụ Oge: <1 nkeji Maka ndị gị na-aja anyị mma na asọmpi Cisco I-Prize: Cisco I-Prize Finalists, Anyị nwere ekele maka ndidi gị ma ghọta na ị na-echesi nsonaazụ ya ike. Anyị kwesịrị ịrịọ gị ka gị na ya nọrọ chere obere izu ole na ole. Cisco dị egwu iji rụọ ọrụ site na usoro a dum. Ọ bụụrụ anyị nnukwu ahụmịhe ma anyị na-atụ anya ihe ga-esi na ya pụta! Anyị ga-anọ ebe a, Cisco!
Ịgụ Oge: 4 nkeji M ikpe mara bashing Manufacturing ebe a na Indiana dị ka nke na-esote Ihọd. Mgbe m na-eche n'ichepụta ọrụ, M na-ese a Ihọd na coveralls-eme ụfọdụ monotonous mmepụta nzukọ akara ọrụ ugboro ugboro. Otú ọ dị, nghọta m adịghị iche na ndị nọ n'afọ iri na ụma n'oge a. Nlụpụta na lọjistik abụghị ọbụna okwu na-atọ ụtọ. Ha emeela agadi. Ha na-agwụ ike. O siri ike ile ha anya n'ụzọ ọ bụla ọzọ! Eziokwu bụ na n'ichepụta na lọjistik bụ ihe ọ bụla
← Nke gara aga 1 ... 707 708 709 ... 852 Ọzọ →
Page 708 nke 852